Itoobiya oo beenisay in ciidamo Somaaliyeed u dagaalameen | KEYDMEDIA ONLINE
Itoobiya oo beenisay in ciidamo Somaaliyeed u dagaalameen
Dowladda Itoobiya ayaa been abuur ku tilmaantay wararka sheegaya in ciidamo Soomaaliyeed ay ka qeyb qaateen dagaalka gobolka Tigray-ga ee waqooyiga dalkaas.
ADDIS-ABABA, Itoobiya - Todobaadkii lasoo dhaafay ayuu soo ifbaxay warka ah in dhalinyaro Soomaaliyeed oo dowladdu tababar ugu qaaday dalka Eritrea loo daabulay gudaha Itoobiya si ay uga qeyb qaataan dagaalka ka dhanka ah Urur-ka TPLF.
Hayeeshee warkaas ayaa banaanka si xoogan u yimid bilaawgii Isbuucaan, markaas oo waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtoodu maqan tahay ay si is daba jog ah uga soo muuqdeen war baahinta iyaga oo ka cabanaya in aysan nolol iyo geeri midna meel ku sheegin dhalaankooda.
Wasiirka Warfaafinta, Cusmaan Abuukar Dubbe, ayaa sheegay in arintaan ay tahay mid la buunbuuniyay oo been abuur ah, mana uusan keennin wax caddayn oo la xariirta nolosha dhalinyaradaan la la’yahay.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya, Danjire Dina Mufti, oo dhiibayay warbixinta toddobaadlaha ah ee wasaaradda ayaa sheegay in aysan waxba ka jirin in ciidamo ajanabi ah ay ka qeyb qaateen dagaalka ka dhacay Itoobiya.
“Waxaan aragnay warbixino ku saabsan in ciidamada Eriteriya u gudbeen dhanka Itoobiya si ay ucaawiyaan dowlada, Waxaan sidoo kale goobjoog ka nahay warbixino isku mid ah oo ku saabsan in askarta Soomaalida ee ka qeyb qaateen isla dagaalkaa, Labadan sheegashoba waa been abuur an sal iyo raad lahayn”. Ayuu yiri Dina Mufti.
Dina Mufti oo ku faanay in Dowladda Itoobiya aysan u baahneyn caawinaad ay helaan Soomaaliya ayaa keenin wax caddayn oo ku saabsan in ciidamo Soomaaliyeed aysan ka qeyb qaadan dagaalkaas.
Farmaajo ayaa ilaa hadda ka aamusan dhacdadaan, dhawaan ayayna ahayd markii taliyayaasha Sirdoonada Saddexda waddan ee kala ah Soomaaliya, Itoobiya iyo Eratariya ku Shireen Muqdisho.
Warar 17 October 2021 16:37
Warar 17 October 2021 15:19
Warar 17 October 2021 13:58